1.1 agaghị akpọ AVI on Yosemite
1.2 FLV maka QuickTime on Mac
1.3 QuickTime Ọ dịghị Sound
1.4 QuickTime Video ka iMoive
1.5 QuickTime Videos ka YouTube
1.6 QuickTime Movie ka DVD
1.9 QuickTime Player Mac Atụmatụ
1.10 QuickTime-adịghị arụ ọrụ
2.1 converting .MOV ka .MOV
2.2 QuickTime ka MP3
Ma gụọ 2.3 tọghata QuickTime Video
3.1 n'Ubi QuickTime Video
3.2 QuickTime ndepụta okwu
3.3 QuickTime ngwa Motion
4.1 QuickTime ihuenyo ndekọ
5 ngwa mgbakwunye
5.1 QuickTime ngwa mgbakwunye na Chrome
5.2 QuickTime ngwa mgbakwunye na Firefox
7.1 QuickTime maka Windows
7.2 QuickTime Pro Atụmatụ
7.8 VLC MA Ọ BỤ QuickTime
7,10 QuickTime 64-bit Version
7,11 QuickTime MPEG-2 playback
Part1: QuickTime Ọ dịghị Aba arụ ọrụ na Google Chrome
Part2: QuickTime (QTPlugin.ocx) adịghị agba ọsọ na Internet Explorer
Nkebi nke 3: QuickTime-adịghị arụ ọrụ na Firefox
QuickTime bụ a mgbasa ozi ọkpụkpọ maka ma PC na Mac nke nwekwara ike-eji idekọ ma ọ bụ tọghata media n'ime ihe ọ bụla chọrọ usoro. Ọ na-arụ ọrụ n'ihi na ma na desktọọpụ na ọkacha mmasị gị nchọgharị. I nwekwara ike enuba media gị ike mbanye ma ọ bụ ozugbo si ọkacha mmasị gị video website.
Google chrome-enye ohere maka plugins ike ga-enyere atọ ọzọ omume na-agba ọsọ nke ọma. Nkwụnye-ins nwere ike tụgharịa na ma ọ bụ gbanyụọ dabere chọrọ arụmọrụ. Ma e nwere ụfọdụ nkwụnye ins ga-eme ka o siere gị iji QuickTime on Google Chrome, ma n'ihi na nkwụnye bụ nkwarụ ma ọ bụ na-efu site na ihe nchọgharị. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na-64 bit version nke chrome ị gaghị enwe ike iji QuickTime dị ka Apple adịghị nwere 64bit QuickTime nkwụnye ma.
Ikpe: agaghị m enwe ike na-ekiri na vidiyo si na a na saịtị ọbụna mgbe wụnye QuickTime, na QuickTime plugin na-adịghị depụtara na nkwụnye ins ndepụta.
Edozi: na-esonụ bụ a workaround ka nke nke 'Chrome anaghị nwere NPAPI ikwunye-na arụnyere' na mgbakwunye na nke n'elu nsogbu.
Aka nkwụnye na-eme na-esonụ, na-eso nzọụkwụ dị ka e n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Mwepụta nchọgharị gị (na nke a Google Chrome)
Nzọụkwụ 2: na-abanye n'ime nchọgharị adreesị mmanya ụdị chrome: // flags / # nwee-npapi dị ka e gosiri na foto a nyere n'okpuru.
Nzọụkwụ 3: pịgharịa gaa na ala na anya n'ihi na na njikọ "Kwado NPAPI" na pịa ya.
Nzọụkwụ 4: Pịa na checkbox aka ya.
Nzọụkwụ 5: Pịa "Relaunch Ugbu a," emi odude na ala nke ihuenyo ka Malitegharịa ekwentị gị na ihe nchọgharị.
Nzọụkwụ 6: Chere maka chrome Ibu Ibu na mgbe ahụ pịnye Chrome: // Ikwunye-ins n'ime adreesị mmanya na pịa Tinye na-aga azụ nkwụnye-ins ndepụta.
Nzọụkwụ 7: gosiri na NPAPI plugin na kwukwara na-arụ ọrụ ugbu a.
Nke a kwesịrị inwe ike QuickTime na ọ ga-arụ ọrụ ugbu a na Google Chrome maka gị.
QTPlugin.ocx bụ otu faịlụ mepụtara apple kọmputa maka windows sistemụ na-arụ ọrụ QuickTime. Nke a plugin-enyere gị na-egwu agbakwunyere video on a webpage. A video nwere ike ghara ịdị egwu ma ọ bụ Ibu Ibu ma ọ bụrụ na QuickTime ibu a rụrụ arụ QTPlugin ma ọ bụ ngwa mgbakwunye na-efu.
Ikpe: M na-eji Windows 8 na ọhụrụ Internet Explorer version na QuickTime ọkpụkpọ arụnyere, oge ọ bụla m pịa "Play Video" m ga-esi njehie ozi si "biko wụnye QuickTime".
Edozi: Ị ma mkpa ego ma ọ bụrụ na ị na-eji ndị ọhụrụ QuickTime ma ọ bụ ma ọ bụrụ na QTPlugin na-nyeere ma ọ bụ.
Nzọụkwụ 1: Lelee ma ọ bụrụ na plugin na-nyeere ma ọ bụ. Eso ndị a n'ihi na.
Nzọụkwụ 2: Open Internet Explorer na isi na-ngwaọrụ menu.
Nzọụkwụ 3: Pịa on 'Jikwaa tinye-ons'.
Nzọụkwụ 4: na 'Jisiri tinye-ons' window, anya maka QuickTime ma mee ya.
Nke a kwesịrị idozi nsogbu, ma dị nnọọ bụrụ na ọ na-adịghị, na-eso na-esote set nke iji reinstall QuickTime na kọmputa gị.
Nke a ndu ga-arụ ọrụ dị nnọọ mma na Windows 10 kọmputa, Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị na-eji ihe ọ bụla ọzọ version nke Windows ma ọ bụ ikekwe Mac,-agbaso nanị isi nzọụkwụ na ọ ga-adị mma.
Nzọụkwụ 1: pịa Windows isi ma ọ bụ ịkpali gị cursor na ala aka ekpe gị ákwà wee pịa na Windows akara ngosi.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, pịnye ke 'Control Panel' na ngalaba Search Windows. Windows ga ugbu a na-akpaghị aka ịchọ Control Panel ma depụta ya dị ka Best egwuregwu dị ka hụrụ na screenshot nyere n'okpuru. Pịa na nhọrọ nke Control Panel a na ndepụta.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo ị bụ na Control Panel window, anya maka nhọrọ na-ekwu Mmemme na Atụmatụ, ozugbo hụrụ, pịa ya.
Nzọụkwụ 4: Site ndepụta nke omume nke ga-egosi na ihuenyo ọzọ, chọta QuickTime na nri pịa ya. Site dobe ala menu, họrọ Uninstall iwepụ na QuickTime ngwa na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 5: Ugbu a, na-eso na ihuenyo ntụziaka mezue un-echichi nke gị QTPlugin.ocx metụtara omume.
Nzọụkwụ 6: Download QuickTime si Apple Store, ebe a bụ njikọ: https://support.apple.com/downloads/quicktime
Nzọụkwụ 7: Ugboro abụọ click na ebudatara faịlụ iji wụnye ọhụrụ ebudatara ngwa.
Nzọụkwụ 8: Soro na ihuenyo ntuziaka ka mezue echichi.
Na ọ bụ ya, ugbu a, gị mgbasa ozi faịlụ ga-akpọ na Internet Explorer mgbe echichi bụ ihe ịga nke ọma n'elu.
QuickTime nwere ike ghara ịdị na-arụ ọrụ na Firefox n'ihi na nchọgharị nwere ike ghara ka aha mime ụdị mkpa maka Midi playback. Ọzọ mere gị videos agaghị na na na Firefox Nchọgharị bụ n'ihi na nke a na-efu QuickTime plugin yikarịrị. Mgbe ụfọdụ, ndị QuickTime faịlụ nwere ike na--edozi site QuickTime ọkpụkpọ.
Ileba: Olee wepụ "ajụjụ akara" mgbe ọ bụla ị na-agbalị na-egwu a video on Firefox, ma ọ bụ mgbe ọ na-ekere na video n'enweghị onye audio mgbe eji QuickTime.
Edozi: Lee ndị nzọụkwụ mkpa ka i soro iji idozi n'elu nke.
Nzọụkwụ 1: Mepee nchọgharị gị (Firefox na nke a), anyị nwere ike ikwu na ị na-ibudata ọhụrụ version si: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/.
Nzọụkwụ 2: Were gị cursor n'elu aka nri n'akụkụ nke ihuenyo wee pịa na menu icon, dị ka e gosiri na foto a nyere n'okpuru, na pịa na taabụ Nhọrọ.
Step3: mgbe ahụ gaa na Ngwa taabụ na ekpe n'akụkụ aka nke ihuenyo wee họrọ nhọrọ nke 'Jiri QuickTime ngwa mgbakwunye (na Firefox)' ọ bụla ọdịnaya ụdị metụtara fim na videos. Lee foto dị nyere n'okpuru na-esi eme ya.
Nke a kwesịrị inwe ike nhọrọ nke na-akpọ videos site QuickTime on Mozilla Firefox.
Alternatively: Na omume na plugin bụ ndị nwere nkwarụ, na-eso nzọụkwụ dị ka e nyere n'okpuru aka ya.
Nzọụkwụ 1: Pịa na menu na akara ngosi na n'elu nri akuku nke nchọgharị ma họrọ 'Tinye-ons' taabụ.
Nzọụkwụ 2: wee họrọ Plugins panel na gbadaa na chọta QuickTime na listi plugins. Ozugbo hụrụ, nanị họrọ nhọrọ nke Always Mee ọ rụọ ọrụ dị ka e gosiri screenshot nyere n'okpuru.
Olee otú mpikota onu a Video na QuickTime Player Pro
QuickTime converting .MOV ka MOV? Ọ bụ Crazy!
2 Atụmatụ maka QuickTime plugin na-arụ ọrụ nke ọma na Firefox!
Olee otú iji tọghata QuickTime ka WMV
Olee Otú M Pụrụ Wụnye QuickTime 7 ma ọ bụ Pro N'ihi OS X Mavericks?
> Resource> QuickTime> Edozi: 3 'QuickTime-adịghị arụ ọrụ' ikpe